‘Ho Vavolombeloko Ianareo’—Asa. 1:8
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Jolay 2014
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mooré Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
‘Ho Vavolombeloko Ianareo’
‘Hoy [i Jesosy]: “Ho vavolombeloko any amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany ianareo.”’—ASA. 1:7, 8.
HITANAO VE NY VALIN’IRETO?
Inona no nataon’i Jesosy, mifanaraka amin’ny dikan’ny anarany hoe “I Jehovah dia Famonjena”?
Nahoana i Jesosy no nilaza hoe: ‘Ho vavolombeloko ianareo’?
Nahoana isika no matoky fa ho vitantsika ny asa fitoriana?
1, 2. a) Iza no vavolombelon’i Jehovah miavaka indrindra? b) Inona no dikan’ny hoe Jesosy, ary inona no nataony, mifanaraka amin’izany anarany izany?
NITENY toy izao tamin’ny governoran’i Jodia i Jesosy Kristy, tamin’izy notsaraina talohan’ny namonoana azy: “Izao no nahaterahako, ary izao no nahatongavako ho amin’izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina.” (Vakio ny Jaona 18:33-37.) Be herim-po tokoa izy! Vao avy nilaza izy tamin’io fa mpanjaka. Nilaza ny apostoly Paoly tatỳ aoriana fa “vavolombelona nanao fanambarana ampahibemaso tsara teo anatrehan’i Pontio Pilato” i Jesosy. (1 Tim. 6:13) Tena ilaina tokoa indraindray ny herim-po, raha tiantsika ny ho “vavolombelona mendri-pitokisana sy marina” eto amin’ity tontolon’i Satana feno fankahalana ity.—Apok. 3:14.
2 Efa vavolombelon’i Jehovah i Jesosy, satria anisan’ny firenena jiosy. (Isaia 43:10) Izy no vavolombelona lehibe indrindra nitondra ny anaran’Andriamanitra. Zava-dehibe tamin’i Jesosy ny hevitry ny anarana nomen’Andriamanitra azy. Nilaza tamin’i Josefa, ray nitaiza an’i Jesosy, ny anjely iray fa avy amin’ny fanahy masina ilay zaza ao an-kibon’i Maria. Hoy ilay anjely avy eo: “Hiteraka zazalahy izy, ary ataovy hoe Jesosy ny anarany, fa izy no hamonjy ny fireneny ho afaka amin’ny fahotan’izy ireo.” (Mat. 1:20, 21; f.a.p.) Miaiky ny ankamaroan’ny manam-pahaizana momba ny Baiboly fa avy amin’ilay anarana hebreo hoe Jesoa ny hoe Jesosy. Misy fanafohezana ny anaran’Andriamanitra ao amin’izy io, ary midika hoe “I Jehovah dia Famonjena.” Nanao zavatra mifanaraka amin’izany anarany izany i Jesosy, ka nanampy ny ‘ondry very teo amin’ny taranak’Israely’ mba hibebaka ka hahazo sitraka amin’i Jehovah indray. (Mat. 10:6; 15:24; Lioka 19:10) Izany no nahatonga an’i Jesosy hitory momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Hoy i Marka, mpanoratra Filazantsara: “Nankany Galilia i Jesosy ka nitory ny vaovao tsaran’Andriamanitra, nanao hoe: ‘Efa tonga ny fotoana voatondro, ary efa manakaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Mibebaha ianareo, ka minoa ny vaovao tsara.’ ” (Mar. 1:14, 15) Be herim-po koa i Jesosy, ka nilaza ny tsy nety nataon’ireo mpitondra fivavahana jiosy. Izany no antony iray nahatonga azy ireo hampamono azy teo amin’ny tsato-kazo.—Mar. 11:17, 18; 15:1-15.
“NY ASA LEHIBE NATAON’ANDRIAMANITRA”
3. Inona no nitranga ny andro fahatelo taorian’ny nahafatesan’i Jesosy?
3 Nisy fahagagana lehibe anefa! Nanangana an’i Jesosy tamin’ny maty i Jehovah, ny andro fahatelo taorian’ny nahafatesany. Lasa anjely tsy mety maty izy fa tsy olombelona intsony. (1 Pet. 3:18) Nitafy vatan’olombelona i Jesosy Tompo mba hanaporofoana fa tena velona indray izy. Indimy izy, fara fahakeliny, no niseho tamin’ny mpianatra samihafa tamin’ny andro nitsanganany tamin’ny maty.—Mat. 28:8-10; Lioka 24:13-16, 30-36; Jaona 20:11-18.
4. Inona no nataon’i Jesosy rehefa niseho tamin’ny mpianany izy, ary inona no andraikitra nomeny azy ireo?
4 Tamin’ny fotoana nivorian’ny apostoly niaraka tamin’ny olon-kafa i Jesosy no niseho fanindiminy. Nanazava ny Tenin’Andriamanitra tamin’izy ireo izy, tamin’io fotoana miavaka io. “Nosokafany tanteraka ny sain’ireo mba ho azon’izy ireo tsara ny hevitry ny Soratra Masina.” Lasa takatr’izy ireo fa efa voalazan’ny Soratra Masina mialoha hoe hovonoin’ny fahavalon’Andriamanitra i Jesosy ary hatsangana. Nolazain’i Jesosy ny andraikitr’ireo mpianany, tamin’ny faran’io fivoriana io. Nilaza izy fa “amin’ny anarany no hitoriana any amin’ny firenena rehetra ny fibebahana hahazoana famelan-keloka”, ary hanomboka ao Jerosalema izany. Nilaza koa izy fa ho ‘vavolombelona’ hanambara an’izany izy ireo.—Lioka 24:44-48.
5, 6. a) Nahoana i Jesosy no nilaza hoe: ‘Ho vavolombeloko ianareo’? b) Inona no zava-baovao notorin’ny mpianatr’i Jesosy?
5 Azo antoka àry fa azon’ny apostoly tsara ny baiko nomen’i Jesosy azy ireo, 40 andro tatỳ aoriana. Hoy izy rehefa niseho farany tamin’izy ireo: “Ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary any amin’ny faritra lavitra indrindra amin’ny tany ianareo.” (Asa. 1:8) Nahoana i Jesosy no nilaza hoe: ‘Ho vavolombeloko ianareo’, fa tsy hoe ho vavolombelon’i Jehovah? Satria Israelita no niresahany, ary efa vavolombelon’i Jehovah izy ireo.
Mpianatr’i Jesosy isika, ka mitory foana momba an’izay kasain’i Jehovah hatao amin’ny hoavy (Fehintsoratra 5, 6)
6 Nila nampahafantatra zava-baovao iray mifandray amin’ny fikasan’i Jehovah ny mpianatr’i Jesosy, dia ny hoe manafaka ny olona amin’ny ota sy ny fahafatesana ny nahafatesan’i Jesosy sy ny nitsanganany tamin’ny maty. Tsara lavitra noho ny fanafahana ny Israelita tamin’ny fanandevozana tany Ejipta sy tany Babylona izany fanafahana izany. Tamin’ny Pentekosta taona 33, dia niresaka momba “ny asa lehibe nataon’Andriamanitra” ireo mpianatr’i Jesosy avy nahazo ny fanahy masina. Olona an’arivony no nibebaka sy nino ny soron’i Jesosy. Hitan’i Jesosy avy teo ankavanan’Andriamanitra tany an-danitra àry fa maro no novonjen’i Jehovah tamin’ny alalany, ka voaporofo fa marina ny hevitry ny anarany.—Asa. 2:5, 11, 37-41.
“VIDIM-PANAVOTANA HO TAKALON’NY MARO”
7. Manaporofo inona ireo zava-nitranga tamin’ny Pentekosta taona 33?
7 Voaporofo tamin’ireo zava-nitranga tamin’ny Pentekosta taona 33, fa neken’i Jehovah ny sorona lavorary nataon’i Jesosy mba hanaronana ny fahotana. (Heb. 9:11, 12, 24) Nohazavain’i Jesosy fa “tsy tonga mba hotompoina izy fa mba hanompo, ka hanome ny ainy ho vidim-panavotana ho takalon’ny maro.” (Mat. 20:28) Tsy ireo Jiosy nibebaka ihany no tafiditra amin’ilay hoe olona “maro” handray soa amin’ny vidim-panavotana. Sitrapon’Andriamanitra “ny hamonjena ny karazan’olona rehetra”, satria “manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” ny vidim-panavotana.—1 Tim. 2:4-6; Jaona 1:29.
8. Tonga hatraiza ny fitorian’ny mpianatr’i Jesosy, ary ahoana no nahavitan’izy ireo an’izany?
8 Nanana herim-po mba hijoroana ho vavolombelon’i Jesosy ve ireo mpianany voalohany ireo? Izany tokoa, nefa tsy noho ny herin’izy ireo. Ny fanahy maherin’i Jehovah no nandrisika sy nanome herim-po azy ireo mba hitory foana. (Vakio ny Asan’ny Apostoly 5:30-32.) Tokotokony ho 27 taona taorian’ny Pentekosta taona 33, dia azo lazaina fa efa nandre ‘ny fahamarinan’ny vaovao tsara’ ny Jiosy sy ny hafa firenena tany amin’ny faritra maro ‘teny ambanin’ny lanitra.’—Kol. 1:5, 23.
9. Inona no nitranga teo anivon’ny fiangonana kristianina, araka ny efa voalaza mialoha?
9 Mampalahelo fa lasa nampianatra hevi-diso ny Kristianina sasany teo anivon’ny fiangonana, rehefa nandeha ny fotoana. (Asa. 20:29, 30; 2 Pet. 2:2, 3; Joda 3, 4) I Satana, izay antsoina hoe ilay “ratsy”, no nahatonga an’io fivadiham-pinoana io. Nilaza i Jesosy fa hiely be izany, ka hanjary tsy hiavaka intsony ny tena Fivavahana Kristianina, mandra-pahatongan’ny “fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.” (Mat. 13:37-43) Nataon’i Jehovah Mpanjakan’ny olombelona i Jesosy tamin’ny Oktobra 1914. Nanomboka teo ny ‘andro faran’ny’ tontolo ratsin’i Satana.—2 Tim. 3:1.
10. a) Oviana ilay daty miavaka efa nambaran’ny voahosotra mialoha? b) Inona no nitranga tamin’ny Oktobra 1914, ary inona no mampiharihary fa marina izany?
10 Efa nanambara mialoha ireo Kristianina voahosotra fa ho daty miavaka ny Oktobra 1914, satria amin’io no hanomboka hanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra. Ahoana no nahalalany an’izany? Nandinika ny faminanian’i Daniela izy ireo. Voalaza ao fa misy hazo goavam-be iray nokapaina ary nitombo indray rehefa afaka “fe-potoana fito.” (Dan. 4:16) Nantsoin’i Jesosy hoe “fe-potoana voatondro ho an’ny hafa firenena” io fe-potoana io, ao amin’ilay faminaniany momba ny fanatrehany sy “ny fifaranan’ny rafitr’ity tontolo ity.” Nanomboka tamin’ny 1914, dia niharihary tamin’ny rehetra fa tanteraka ny famantarana ny fanatrehan’i Kristy, ilay Mpanjaka vaovaon’ny tany. (Mat. 24:3, 7, 14; Lioka 21:24) Rehefa mitory àry isika, dia manambara fa nataon’i Jehovah Mpanjaka i Jesosy tamin’ny 1914. Lasa anisan’ny “asa lehibe nataon’Andriamanitra” koa mantsy izany.
11, 12. a) Nanomboka nanao inona ilay Mpanjaka vaovaon’ny tany, tamin’ny 1919? b) Inona no niharihary nanomboka tamin’ny 1935 tany ho any? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
11 Nanomboka nanafaka ny voahosotra avy tao amin’i “Babylona Lehibe” i Kristy, taoriana kelin’ny nahalasa Mpanjaka azy. (Apok. 18:2, 4) Lasa azo natao ny nanitatra ny fitoriana haneran-tany taorian’ny Ady Lehibe I, izany hoe tamin’ny 1919. Nanararaotra nitory àry ireo voahosotra hoe mitondra famonjena ny vidim-panavotana, ary efa mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra. Niampy an’arivony ny voahosotra mpiara-mandova amin’i Kristy, vokatr’izany.
12 Niharihary nanomboka tamin’ny 1935 tany ho any, fa nanomboka nanangona ny “vahoaka be” anisan’ny “ondry hafa” i Kristy. An-tapitrisany izy ireo izao ary avy amin’ny firenena rehetra. Mitari-dalana azy ireo ny voahosotra ka be herim-po toa an’i Jesosy izy ireo, ary manambara fa avy amin’Andriamanitra sy Kristy ny famonjena azy. Mitory foana izy ireo sady mino ny vidim-panavotan’i Kristy, ka ho tafavoaka velona rehefa horavana ny tontolon’i Satana amin’ny “fahoriana lehibe.”—Jaona 10:16; Apok. 7:9, 10, 14.
‘MISIKÌNA HERIM-PO MBA HITORY NY VAOVAO TSARA’
13. Tapa-kevitra hanao inona isika Vavolombelon’i Jehovah, ary nahoana isika no matoky fa hahavita izany?
13 Tombontsoa tokoa ny manambara “ny asa lehibe” nataon’i Jehovah sy ny fampanantenany momba ny hoavy. Enga anie isika ka hankasitraka an’izany foana. Marina fa tsy mora indraindray ny mitory. Maro amintsika no mitory ao amin’ny faritany be olona tsy miraika, na maneso, na manenjika. Afaka manahaka ny apostoly Paoly sy ny namany anefa isika. Hoy i Paoly: ‘Nisikina herim-po tamin’ny alalan’Andriamanitsika izahay, mba hitory taminareo ny vaovao tsaran’Andriamanitra, tao anatin’ny ady mafy.’ (1 Tes. 2:2) Aza kivy àry. Aoka isika ho tapa-kevitra ny hampiseho foana hoe nanokan-tena ho an’i Jehovah, mandra-pahatongan’ny fandravana ny tontolon’i Satana. (Isaia 6:11) Tsy ho vitantsika amin’ny herintsika samirery izany. Mila manahaka ny Kristianina voalohany isika, ka hangataka amin’i Jehovah mba hanome antsika “hery fanampiny” amin’ny alalan’ny fanahiny.—Vakio ny 2 Korintianina 4:1, 7; Lioka 11:13.
14, 15. a) Ahoana no nitondran’ny olona ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany, ary ahoana no nampaherezan’ny apostoly Petera azy ireo? b) Inona no tokony hotadidintsika rehefa enjehina isika satria Vavolombelon’i Jehovah?
14 Olona an-tapitrisany no milaza ho Kristianina ankehitriny. ‘Mandà an’Andriamanitra amin’ny ataony’ anefa izy ireo, “satria maharikoriko sy tsy mankatò ary tsy mendrika hanao asa tsara na inona na inona.” (Tit. 1:16) Tsara ny mitadidy fa nankahalain’ny olona maro ny tena Kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Izany no nahatonga ny apostoly Petera hampahery azy ireo, ka hilaza hoe: ‘Sambatra ianareo raha tevatevaina noho ny anaran’i Kristy, satria mitoetra aminareo ny fanahin’Andriamanitra.’—1 Pet. 4:14.
15 Mihatra amin’ny Vavolombelon’i Jehovah ankehitriny koa ve izany? Izany tokoa, satria mitory isika fa Mpanjaka i Jesosy. Rehefa ankahalaina àry isika satria mitondra ny anaran’i Jehovah, dia toy ny hoe “tevatevaina noho ny anaran’i Kristy” ihany. Na i Jesosy aza mantsy nilaza tamin’ny mpanohitra azy hoe: ‘Tonga tamin’ny anaran’ny Raiko aho, nefa tsy noraisinareo.’ (Jaona 5:43) Aza kivy àry raha sendra misy manohitra ianao rehefa mitory. Manaporofo izany fa ankasitrahan’Andriamanitra ianao ary ‘mitoetra aminao ny fanahiny.’
16, 17. a) Inona no zava-misy eo anivon’ny vahoakan’i Jehovah eran-tany? b) Tapa-kevitra ny hanao inona ianao?
16 Mila mitadidy koa anefa isika fa mitombo be ny olona manaiky ny fahamarinana maneran-tany. Mbola mahita olona mihaino tsara isika, na dia any amin’ny faritany itoriana matetika aza, ka afaka mitory an’ilay hafatra momba ny famonjena. Aoka isika hazoto hitsidika ny olona liana sy hampianatra Baiboly azy ireny, raha azo atao. Hiezaka isika mba hanampy azy ireny handroso ka hanokan-tena sy hatao batisa. Hoy i Sarie, anabavy any Afrika Atsimo, izay nazoto nitory nandritra ny 60 taona mahery: “Tena faly aho fa afaka mifandray tsara amin’i Jehovah, ilay Mpanjakan’izao rehetra izao, noho ny sorom-panavotan’i Jesosy. Faly koa aho fa afaka mampahafantatra ny anarany be voninahitra.” Azo inoana fa izany koa no tsapanao. Nanampy ny zanany telo mianadahy sy ny olona maro hafa mba ho lasa mpanompon’i Jehovah i Sarie sy Martinus vadiny. Hoy ihany i Sarie: “Tsy misy asa mahafa-po noho ny fitoriana. Mampiasa ny fanahiny masina i Jehovah mba hahazoantsika rehetra ny hery ilaina hanohizana an’io asa mamonjy aina io.”
17 Na efa vita batisa isika na mbola vao miezaka ho amin’izany, dia tena tokony hankasitraka ny tombontsoantsika miaraka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah eran-tany. Ataovy tsara araka izay azo atao àry ny asa fitoriana, ary miezaha foana mba tsy ho voaloton’ny tontolon’i Satana. Hanome voninahitra an’ilay Raintsika be fitiavana any an-danitra ianao raha manao izany. Tombontsoa mantsy ny mitondra ny anarany.
Hizara Hizara ‘Ho Vavolombeloko Ianareo’
Nahafoy Tena Izy Ireo: Mikronezia
“Fantatr’i Jehovah ny Azy”
‘Miala Amin’ny Tsy Fahamarinana’ ny Vahoakan’i Jehovah
TANTARAM-PIAINANA Namoy ny Raiko Aho Nefa Nahita Ray Vaovao
“Ianareo no Vavolombeloko”
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2014
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2014
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Jolay 2014